Okpokoro Nchaji, Ndị na-emepụta ihe na-ebufe ego nke China, ndị na-ebubata ihe, ụlọ ọrụ - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Nchaji Ikpo
Ọrụ nke ikpo nchaji yiri nke gas na-enye n'ọdụ ụgbọ mmiri. Enwere ike idozi ya na ala ma ọ bụ mgbidi ma tinye ya n'ụlọ ọha (ụlọ ọha, ụlọ ahịa, ebe a na-adọba ụgbọala, wdg) na ebe obibi ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ nwere ike dabere na ọkwa voltaji dị iche iche yana ụgwọ ụdị ụgbọ ala eletrik dị iche iche. A na-ejikọta njedebe ntinye nke ikpo nchaji ozugbo na grid AC, na njedebe mmepụta na-eji nkwụnye ụgwọ maka ịchaji ụgbọ ala eletrik.
HNAC na-enye ụdị ngwaahịa atọ: AC&DC Integrated charging pile, AC cha cha cha na DC cha cha cha cha cha. Okpokoro chajị na-enye ụzọ chajị abụọ: chajị agba na chaja ngwa ngwa. Ndị mmadụ nwere ike iji otu kaadị chajịjị mee ka kaadị ahụ dị na interface mmekọrịta mmadụ na kọmpụta na-enye site na mkpocha chaja iji rụọ ọrụ dịka usoro nchaji kwekọrọ, oge nchaji, na mbipụta data ọnụ ahịa. Ihuenyo ngosi ikpo ocha nwere ike igosipụta data dị ka ike nchaji, ọnụ ahịa na oge nchaji.
Njirimara ngwaahịa maka ikpo chaja:
1. Nchekwa ike na arụmọrụ dị elu: Site na akụrụngwa dị elu na njikarịcha na-aga n'ihu nke nhazi parameter, na njikwa njikwa dị elu, arụmọrụ ntụgharị dị elu dị ka 97%, na-ebelata oge nchaji na ịcha ụgwọ, na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ dịkwuo elu, na ịmepụta uru dị elu. maka ndị ahịa;
2. Nchekwa na ntụkwasị obi: Na ntinye n'elu / n'okpuru voltaji, mmepụta n'elu-voltaji / n'elu-ugbu a, n'elu okpomọkụ, ntapu, àmụmà nchebe na ndị ọzọ nchebe ọrụ, mmepụta n'okpuru voltaji mkpu, hụ na nchekwa nke ngwaahịa na ndị na-arụ ọrụ na ihe niile- ụzọ okirikiri;
3. Nkwụsi ike dị elu: Modul chaja nwere nkà na ụzụ nwere ikike, ma gafere ule ntụkwasị obi siri ike na ule gburugburu ebe obibi dị ukwuu tupu nnyefe; A ga-ekewapụ otu modul na ikpo ọkụ na-akpaghị aka na usoro ahụ mgbe ọdịda, nke na-adịghị emetụta ọrụ dum nke usoro ahụ;
4. Obere nha, obere ọrụ ala: Site na njupụta ike dị elu ma jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị yiri ya na ahịa, ọ nwere njirimara nke obere nha, obere ọrụ ala, nke na-echekwa ihe na iji ala na-ebelata ego mbụ;
5. Ike gburugburu ebe obibi mgbanwe: -30 ℃-65 ℃ na-arụ ọrụ okpomọkụ nso, IP54 nchebe larịị, mfe ịnagide dị iche iche ihu igwe na ihu igwe gburugburu ebe obibi.
Igwe na-emekọrịta AC nke agba atọ